Sharaxaadda İBB ee Kanal İstanbul Iskaashiga Borotokoolka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSharaxaada IMM ee Borotokoolka Is-kaashiga Istanbul ee Kanal
05 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
Diidmada ka dib diidmada dacwadda ay soo gudbiyeen 9 qol oo xirfadlayaal ah 2018 iyada oo la tirtiray Borotokoolka Iskaashatada Channel Istanbul oo ay kala saxiixdeen Wasaaradda Deegaanka iyo Wasaaradda Magaalada ee Gaadiidka iyo Kaabayaasha, sharraxaad ayaa ka timid IMM. degmada SözcüMurat Ongun, go'aanka diidmada ee kiiska ka hor inta uusan go'aan ka gaarin IMM ayaa yiri.
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) SözcüMurat Ongun, TMMOB'a wuxuu furay 9 qol, diidmada Istanbul ee kiiska kiiskan waa la joojiyay borotokoolka kahor go'aanka ka bixitaanka IOM.
Ongun, "Go'aanka ka bixitaanka IMM, rafcaanka qolalka dacwooda waxaa qiimeyn doona maxkamadda gobolka ee maxkamadda sare." Ayuu yidhi.
Dacwaddan oo ay soo gudbiyeen 9 qol oo xirfadle ah sanadka 2018 ayagoo codsaday codsigii in la joojiyo Borotokoolka Iskaashiga Channel-ka ee Istanbul oo ay wada saxiixdeen Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalada Magaalada-Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha.
Maxkamaddu waxay heshay borotokoolka si sharciga waafaqsan oo qolalka xirfadleyda ah waxay ku dhawaaqeen inay rafcaan ka qaadan doonaan go'aanka.
Go'aanka diidmada ee kiiska la xiriira joojinta borotokoolka Kanal Istanbul, oo ay furteen 9 qol oo xiriir la leh TMMOB, ayaa ka horreeya ka laabashada go'aanka IMM. Go'aanka ka noqoshada IMM waxaa qiimeyn ku sameyn doona maxkamadda maamul ee gobolka oo ah maxkamadda sare oo leh diidmada ay sameeyeen qolalka dacwad-oogaha.
Bayaanka uu soo saaray Cevahir Efe Akçelik, Xoghayaha Gudiga Isuduwidda Degmooyinka TMMOB ee Istanbul, waa sida soo socota;
Dava Maaddaama ay tahay shirkadda 'TMMOB' ee 2018, dacwada aan u gudbineyna kansal gaarnimada ee iskaashiga Kanal Istanbul waxaa diiday maxkamadda iyadoo leh "ma jiro wax ku xadgudbay sharciga marka laga hadlayo kiiska". Si kastaba ha noqotee, hawsha sharciga ah ee la xiriirta joojinta borotokoolka weli ma dhammaan.
Annaga oo ah TMMOB iyo qolalka kale ee la shaqeeya, waxaan dhammeynay u diyaargarowga racfaanka. Maxkamadu waxay ku saleysantahay difaacida maamulkii hore ee Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul ee casaanka in la diido .. Waxaan rajeyneynaa in go'aanka uu badali doono inta lagu guda jiro howsha racfaanka. ”
Sanadka 2018, dacwada aan ka bilownay burinta heshiiskii iskaashiga Kanal Istanbul waxaa diiday maxkamada iyadoo ay jirto in aysan jirin wax xad gudub ah oo dhanka sharciga ah. Si kastaba ha noqotee, hawsha sharciga ah ee la xiriirta joojinta borotokoolka wali lama dhamayn ⬇️
Filimka hordhaca ah ee Kanal Istanbul
TCDD Qeexida Khaliijka Marmaray
Faahfaahinta Adeegyada Tareenka Eminönü-Alibeykoy ee ka socda IBB
Borotokoolka Channel Istanbul